विज्ञापन र मार्केटिंग मनोविज्ञान इन्फोग्राफिक
विज्ञापनको लुक्ने मनोविज्ञान
आइतबार, जुलाई 17, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 27, 2011 Douglas Karr
यो BuySellAds बाट एक राम्रो इन्फोग्राफिक हो, भनिन्छ विज्ञापनको लुक्ने मनोविज्ञान। यी मध्ये केही केवल विज्ञापन मात्र होईन, यो समग्र ब्रान्ड मार्केटिंग रणनीति पनि हो। म घटनालाई विज्ञापनको रूपमा हेर्ने गर्छु ... वा हुक.. तर मार्केटिंग सबै योजना र रणनीति हो जुन विज्ञापनको विकासमा पुग्दछ।
हामी मध्ये प्रत्येकलाई टिभी विज्ञापनहरू, आउटडोर बिलबोर्डहरू, वेबसाइट ब्यानरहरू, र साथै छिमेकीहरूका टी-शर्ट वा सहकर्मीहरूको कफि मगहरू मार्फत हरेक दिन ,3,000००० देखि १०,००० ब्रान्ड एक्सपोजरको अधीनमा राखिन्छ। किनकि हामी विज्ञापनहरूसँग डुबेका छौं, मार्केटरहरूले भर्खरको मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान बनाउँछन् र हाम्रो ध्यान खिच्न र ग्राहकको विश्वास प्राप्त गर्न विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्।
के तपाईलाई यो डरलाग्दो लाग्छ? वा यो केवल हामी सबै चाहन्छौं को लागी खेल्छ? हामी अझ रचनात्मक हुन चाहन्छौं ... यदि एक एप्पल खरीदले हामीलाई हामी विश्वास गर्न मद्दत गर्छ भने, के यो खराब छ? र, हार्डवेयरको एप्पलको उत्कृष्ट स्टाइलिंगको साथ - के तिनीहरूले सामान्यतया एप्पललाई अधिक खरीद गर्ने छैनन्? त्यसो भए ... रेट्रोस्पेक्टमा ... एप्पल प्रयोगकर्ताहरू अधिक रचनात्मक छन्? मलाई लाग्छ तिनीहरू हुन सक्छन!
भिडियो: वेब फारामहरू र फर्मस्ट्याकको साथ ल्यान्डि Pages पृष्ठहरू
जुलाई १,, २०१ at १::17२ अपराह्न
मलाई लाग्छ एप्पलसँग विश्वमा सब भन्दा राम्रो प्रविधि मार्केटिंग छ। तिनीहरूको उत्पादनहरू सबै कोटीहरूमा अझै उत्कृष्ट छैनन् कि एप्पल लोगो लाखौं मा ब्रेनवाश गरीएको छ र मेरो विचारमा यस समय विश्वको सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलोजी ब्रान्ड हो।
एन्ड्रोइड ब्रान्डि ((एचटीसी र क्लोनहरू मार्फत) फोन ओएस मार्केटमा यस्तै प्रभाव हुन सुरू हुँदैछ र सामसु / / सोनीसँग केही चलाख ब्रान्डि has पनि छ तर अमेरिकी मार्केटमा सफल जस्तो देखिंदैन तर एशियामा धेरै बलियो छ।
लाखौं एप्पल फ्यान केटाको मतलब सोशल मिडिया एयरवेभले ब्रान्डलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिले भरिएको हुन्छ र जब पनि एप्पलको उत्पाद गल्ती हुन्छ तिनीहरूले एप्पलको डिफेन्समा छिटो हाम फाल्छन् जब सम्म एप्पलले समस्या समाधान नगरेसम्म (उदाहरणका लागि आईफोन with को साथ प्रारम्भिक एन्टेना समस्या)
जुलाई १,, २०१ at १::22२ अपराह्न
अधिकांश व्यक्तिहरू कति मिडिया र शैक्षिक कन्डिसनले उनीहरूको व्यवहारमा प्रभाव पार्छ भनेर पूर्ण रूपमा बेवास्ता देखिन्छ। भाग्यवस यसले सबैलाई काम गर्दैन। हामीले बुझ्नु आवश्यक छ कि सम्भावित ग्राहकहरूलाई हाम्रो ग्राहकहरूको फाइदा लिनको लागि उत्प्रेरित गर्छ; यद्यपि धेरै कम्पनीहरूले यसलाई बलात्कार यौनिक विज्ञापनको साथ धेरै टाढा लिएका छन्।
हामी कति बेवास्ता हुन्छौं भनेर देख्न सकिन्छ हामी कसरी धेरै निगमहरूले बग वा 'संसाधन' को रूपमा चित्रण गर्छौं। हुल्कुमा हाल माथि अपसेल कार विज्ञापन चलिरहेको छ जसले सडकमा बसिरहेको सबै प्रकारका साना ब्रशहरू वा खाली स्थानमा वा चरा चुम्बन गर्न सडकमा चढाईरहेको देखाउँदछ। दुबै दुबै चित्रले यी कम्पनीहरूले हामीलाई के सोच्छन्: बगहरू वा दासहरू।
मलाई खुशी छ कि यस इन्फोग्राफिकले लोगोहरू उल्लेख गर्दछ। म मानिसहरूलाई विज्ञापनको विज्ञापन र मिडिया प्रसारणहरूमा लोगोको प्रतीकवादमा ध्यान दिन प्रोत्साहित गर्दछु। YouTube भिडियोहरू फेला पार्न उत्कृष्ट स्थान हो जुन हामीलाई सबै लोगोलाई के मतलबको बारेमा सचेत गराउँदछ। लोगो प्रतीकवाद को लागी खोजी प्रयास गर्नुहोस्।